समानुपातिक तर्फ कुन दलले कति सिट प्राप्त गरे ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
समानुपातिक तर्फ कुन दलले कति सिट प्राप्त गरे ?
काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या तोकेको हो।
प्रकाशित: २६ माघ २०७४ १६:४५ शुक्रबार
समानुपातिक तर्फ दलले कति सिट प्राप्त गरे